पहिरो पिडितका घर बनाउने मुख्यमन्त्री गुरुङको घोषणा – धौलागिरी खबर
पहिरो पिडितका घर बनाउने मुख्यमन्त्री गुरुङको घोषणा
धौलागिरी खबर	 २०७७ श्रावण २५, आईतवार १८:२१ गते मा प्रकाशित 242 0
म्याग्दी, २५ साउन ः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले पहिरो पिडितका घर प्रदेश सरकारले पुननिर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।
म्याग्दीको बेनी अस्पतालमा सुरु भएको होमोडायलाइसिस सेवाको आइतबार उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले पहिरोपिडितको आवास पुननिर्माण र जोखिमयुक्त बस्ति स्थानान्तरण गरिने बताउनुभएको हो ।
“गण्डकी प्रदेशमा पहिरोले पाँच÷सात सय घर बस्न नमिल्ने बनाएको रिपोर्ट आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “पहिरोले क्षति पुगेका निजी आवासको पुननिर्माण र जोखिमयुक्त बस्ति स्थानान्तरणको काम प्रदेश सरकारले गर्छ ।”
जोखिमयुक्त बस्ति पहिचानका लागि भूगर्वबिद्को टोलि परिचालन गरिने जानकारी गराउदै मुख्यमन्त्री गुरुङले भूकम्प पिडितका जस्तै पहिरोपिडितका निजी आवास बनाउन प्रदेश सरकारले बजेट ब्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश राजधानीमा सरुवा र बालरोग अस्पताल सञ्चालन गरिसकेको जानकारी दिदै शिक्षण र क्यान्सर अस्पताल खोल्ने तयारीमा भएको बताउनुभयो । विपन्न नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन उनिहरुको यसै आर्थिक वर्षबाट स्वास्थ्य बिमाको ब्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले बेनी, पर्वत, स्याङ्जा र तनहुँ जिल्ला अस्पतालमा हेमोडायलाइसिस सेवा सुरु गरेको जानकारी गराउनुभयो । मनाङ र मुस्ताङमा तीन÷तीन तथा प्रदेशका अन्य नौ जिल्लामा भेन्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्ष स्थापना गरेर सेवा सुरु गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
“स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणका लागि सबै अस्पतालमा दरबन्दि अनुसारका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी, पूर्वाधारसँगै उपकरणको ब्यवस्था मिलाउन प्राथमिकता दिएका छौ,” मन्त्री पुनले भन्नुभयो “सेवा र सुबिधा विस्तार गर्दै जिल्ला अस्पतालहरुलाई नमुना अस्पताल बनाउने तयारी छ ।”बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले जिल्लाकै सरकारी अस्पतालमा सेवा र सुबिधा पाएपछि नागरिकलाई राहत मिलेको बताउनुभयो ।
बेनी अस्पतालले सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा उपकरण र पुर्वाधार जुटाएर मिर्गौला रोगबाट पीडित बिरामीका लागि डायलासिस सेवा सुरु गरेका छ । पोखरा, बागलुङ, काठमाडौ, चितवन लगायतका जिल्लामा डायलाइसिस गर्न जानुपर्ने म्याग्दीका मृगौलापिडितको समस्या हटेको बेनी अस्पताल ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले चार वटा हेमोडायलाइसीस मेशिन उपलब्ध गराएको थियो । अस्पताल र स्वास्थ्यको कार्यालय रहेको भवनको भुईतलामा हेमोडायलासिस युनिट स्थापना गरिएको छ । सोका लागि प्रदेश सरकारले मेसिन बाहेक गत आवमा रु. ३५ लाख उपलब्ध गराएको थियो ।
अस्टे«लीयामा रहेका म्याग्देलीको पहलमा दाताले दिएको दुई थान डाइलाइसिस मेसिन पनि छ । डायलाइसिस सेवा सञ्चालन गर्न डाक्टर सहित छ जना तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी ब्यवस्था गरिएको अस्पतालका प्रमुख डाक्टर अमृत अधिकारीले बताउनुभयो ।
छिट्टै भेन्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्ष (आइसीयु) पनि सुरु गर्न लागिएको बेनी अस्पतालले जनाएको छ । पाँच वेड क्षमताको आइसियु वार्ड स्थापना भैसकेको छ । बेनी अस्पतालको सुबिधा विस्तारका लागि गत आर्थिक वर्षमा रु. पाँच करोड भन्दा बढी लागतमा उपकरण खरिद र पूर्वाधार थप भएको छ । वि.स २०७२ मा १५ बाट पचास शैया क्षमतामा स्तरोन्नति भएको अस्पतालमा पचास शैया क्षमताको भवन निर्माणाधिन छ ।